(60seconds အထိ) က Web / လူမှုမီဒီယာဗွီဒီယိုအထူးနှုန်းများ
သင့်ရဲ့ခြေအိတ်ချွတ်ခေါက်လိမ့်မည်ဟု ... မည်သည့်ဘာသာစကားများတွင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Web အစက်အပြောက်! ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သစ်ကူးအကြိုပေါ်တွင်သင်၏တံခါးများမှတစ်ဆင့်မြည်းရောက်စေဖို့ဖန်တီးမှုထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်မှုအနိုင်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူး Telly ဆုချီးမြှင့်ကိုသုံးပါစေ! Turnaround အချိန် 5-7 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက် ... ဒါကြောင့်အချိန်ထွက်ပြေးမတိုင်မီမြန်မြန်!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ View ဗီဒီယိုကိုစီးပွားဖြစ်ပို့လိုက်ကြတယ်။ ဝယ်ယူပြီးနောက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့သင့် TV အစက်အပြောက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်မဟာဗျူဟာအစည်းအဝေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရန်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။
SKU: Web ကို / လူမှုမီဒီယာဗွီဒီယိုအထူးနှုန်းများ အမျိုးအစား: Uncategorized
| နိုက်ကလပ် Nye 2013 Struts တီဗီ 30 (မဲလ်ဘုန်း, သြစတြေးလျ)
မွန်းနိုက်ကလပ် | မြေအောက်ခန်း Nye 2013 | တီဗီ 30 (ဘာမြူဒါ)
DJ သမားဗီဒီယို Loop - Smashing မှတ်တမ်း
သင့်ရဲ့အစုစဉ်အတွင်းအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်များအတွက်အခြေချမနေပါနဲ့! သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်သီချင်းဗီဒီယိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်တောင်သင်ဆဲမယ့်အရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပုံရိပ်ယောင်များသပိတ်မှောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ပိုကောင်းသေးပါကသင်တို့၏နာမနှင့်အတူစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DJ သမားကဗီဒီယိုကွင်း၏တဦးတည်းပါစေ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်လူဦးမျက်နှာပြင်ပယ်သောကြောင့်သင့်ရဲ့ set ကိုလက်စသတ်နေသည်ထင်ရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်။ audio tags များနှင့်ဂီတကုတင်ဤဗီဒီယိုနဲ့ရရှိနိုင်ပါ, အသေးစိတျကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး DJ ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား "Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ 2013" နောက်မှလုပ်ပါတယ်ကျနော်တို့ဒီကသင်၏လက်နက်တိုက်ဘို့ DJ ကိုဗီဒီယိုမိတ်ဆက်ခြင်းကိုရှိရမည်ရာ၌ခန့်ထားပြီ! သင့်အမည်နှင့်ကလပ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီလိုဂိုမပါအပိုဆောင်းတာဝန်ခံမှာဒီစိတ်ကြိုက်ဗီဒီယိုကိုထည့်သွင်းထားသည်။ "MESDAMES ET MESSIEURS, puis-je avoir votre အာရုံကို S'IL vous ပုတီး! SIGNORE အီး SIGNORI, posso avere la vostra attenzione နှုန်းမျက်နှာသာ! Ladies and Gentlemen ငါသင်၏အာရုံစိုက်မှုရှိစေခြင်းငှါ, ဘယျအရာမျက်မြင်သက်သေပါတော့မည်အစစ်အမှန်ပါ။ အဘယျ YOU '' အိပ်မက် IS ခံစားရရန်အကြောင်း Re ။ '' ဤတွင်ကြှနျုပျတို့သညျသှား! ' (ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်) မှ DJ (သင့်အမည်) (Club သို့မဟုတ် COMPANY - CITY / Town) ... ခွေးမ "! (optional)
DJ သမားဗီဒီယို Drop လေး
စုံလင်သော DJ ဗီဒီယိုသင့်ရဲ့ set ကိုစတင်ရန် drop! ဒါဟာသေချာဘို့မိမိတို့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရလိမ့်မယ်။ "ဒါဟာသင်တို့ရှိသမျှအဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရတယ်လူကိုပါပဲ။ " တစ်စုံတစ်ယောက်သည် Screammmmmmm "ဒါဟာတသာ DJ သမား (သင့်အမည်) ရဲ့ မှစ. (သင့်နိုက်ကလပ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမည် - စီးတီးအမည်) --- က Hit (လို့လည်းသိကြပါတယ်: ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်) ။ ! အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရေးယူအတွက်သရုပ်ပြဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါ! အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းတာဝန်ခံမှာ Customize!
ရေဒီယိုကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ထုတ်လုပ်မှု - 60 ရေဒီယိုကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်
သင့်ရဲ့လိုဂိုကို web တလွှားကနေလူကြိုက်များ icon များနှင့်အတူလူနေထူထပ်တဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှုခင်းထဲကပျံလာပါတယ်။ သင့်ရဲ့ website မှာသို့မဟုတ်လူမှုရေးမီဒီယာ URL များကိုဖေါ်ပြခြင်းအဘို့ကြီးသော။ သင်အွန်လိုင်းသူတို့ရှာတွေ့ (နှင့်စာအုပ်) နိုင်မည့်လူအစုအဝေးသိပါစေ!
ခြင်္သေ့ရဲ့ဂိတ်လိုဂိုရဲ့ style အတွက် DJ သမားကဗီဒီယိုမိတ်ဆက်ခြင်း။ တစ်ဦးကဂန္, အထင်ကရဖျော်ဖြေရေးသင့်ရဲ့ DJ သမားအမည်နှင့်ထုံးစံစာသားဖြင့် re-စိတ်ကူးခံစားရတယ်။ ဤသည် DJ သမားကဗီဒီယိုမိမိတို့၏အာရုံကိုဖမ်းရန်သေချာသည်။ အစအဦးသို့မဟုတ်သင့်အစုံမှာ DJ သမားမိတ်ဆက်ခြင်းအဖြစ်ဂရိတ်ရုံညာဘက်အလယ်၌, heck, ညဉ့်ထွက်ပိတ်လိုက်သို့မဟုတ်ရန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DJ သမားကို drop နဲ့ DJ ဗီဒီယိုများအားလုံးလိုပဲဒီစိတ်ကြိုက်, အရည်အသွေးမြင့်မား, High Definition ဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးသာ $ 50 များအတွက်ဗီဒီယိုအစိတ်အပိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့ထုံးစံ ADD ။
အဆိုပါ 20th Century Fox လိုဂိုရဲ့ style အတွက် DJ သမားကဗီဒီယိုမိတ်ဆက်ခြင်း။ တစ်ဦးကဂန္, အထင်ကရဖျော်ဖြေရေးသင့်ရဲ့ DJ သမားအမည်နှင့်ထုံးစံစာသားဖြင့် re-စိတ်ကူးခံစားရတယ်။ ဤသည် DJ သမားကဗီဒီယိုမိမိတို့၏အာရုံကိုဖမ်းရန်သေချာသည်။ အစအဦးသို့မဟုတ်သင့်အစုံမှာ DJ သမားမိတ်ဆက်ခြင်းအဖြစ်ဂရိတ်ရုံညာဘက်အလယ်၌, heck, ညဉ့်ထွက်ပိတ်လိုက်သို့မဟုတ်ရန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DJ သမားကို drop နဲ့ DJ ဗီဒီယိုများအားလုံးလိုပဲဒီစိတ်ကြိုက်, အရည်အသွေးမြင့်မား, High Definition ဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးသာ $ 50 များအတွက်ဗီဒီယိုအစိတ်အပိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့ထုံးစံ ADD
DJ သမားဗီဒီယို Loop ငါးခု (သမုဒ္ဒရာ)
DJ သမားဗီဒီယို Drop FIVE
ယနေ့အထိအများဆုံးဒေါင်းလုတ်လုပ် DJ ကိုဗီဒီယိုမိတ်ဆက်ခြင်း! စင်ကြယ်သော, In-သင့်ရဲ့-မျက်နှာဂရပ်ဖစ်, သက်ရောက်မှုနှင့်အာရုံကိုဖမ်းဆုပ်အသံ၏ 45 စက္ကန့် ... ဗွီဒီယိုကိုအတွင်းအပြင်သင့်အမည်, ကလပ်နှင့်ကုမ္ပဏီများအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူစိတ်ကြိုက်အားလုံး! "Ladies နှင့်လူကြီးလူကောင်းသင်သည်အဘယ်သို့အတွေ့အကြုံကိုပါတော့မည်မျှမကအခြားကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဂီတ၏စည်းချက်တို့ကလွှဲပြောင်းယူခံရဖို့အဆင်သင့်ကိုရယူပါ။ အခုဆိုရင် DJ သမားသင်တို့၏နာမအဘို့ကိုယ့်ကိုယ် Brace ။ Live! အစွန်းရောက်ဂီတအကြောင်းအရာများကြောင့်, clubber ရဲ့သမ္မာသတိအကြံပေးနေသည် ။ ကို T အနုတ် 5, 4, 3, 2, 1 ။ Dance ကြမ်းပြင်, အစပျိုး! (ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်)